विवादास्पद एमसीसी सम्झौतामा के छ ? (पूर्णपाठ) – Lokpati.com
राशिफल चितवन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाल प्रहरी अमेरिका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेस नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रचण्ड मृत्यु सरकार पक्राउ अपराध नेकपा
विवादास्पद एमसीसी सम्झौतामा के छ ? (पूर्णपाठ)
अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने र चिनियाँ सहयोगको ढोका बन्द हुने भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य गणेश साहका अनुसार पार्टीमा सैद्धान्तिक र नीतिगत छलफल गरेर मात्र सरकार अघि बढ्नुपर्ने धारणा दुवै नेताहरूको थियो। उनले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्ता उद्धृत गर्दै भीम रावलजीले यो इण्डो प्यासिफिककै एउटा अङ्ग हो भन्ने धारणा राख्नुभयो।’